साउन २० गते बुधबार कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल! - MassiveKhabar
साउन २० गते बुधबार कस्तो रहला तपाईको दिन ? हेर्नुहोस् दैनिक राशिफल!
लेखक तथा कलाकारहरुको लागि समय अनकुल रहेको छ । दाजु भाइको सम्बन्ध प्रगाड हुनेछ । मध्यान्ह पछी चिन्ता बढ्ने छ र उत्साह कम हुनेछ । संवेदनशीलता बढ्नेछ। साथी भाइ संग प्रवासको सम्भावना रहेको छ । आर्थिक अभाव हुनसक्छ। परिवारका सदस्य संग समय सुखमय बित्नेछ।
दैनिक कार्य सहजै सम्पन्न हुनेछ । धन लाभको सम्भावना रहेको छ । शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । परिवारका सदस्य संग समय रमाइलोमा बित्नेछ । मध्यान्ह पछी व्यवहारिक निर्णय लिन कठिन हुनेछ । हातमा आएको अवसर गुम्न सक्छ । जिद्धि स्वभावको कारण समस्या हुनसक्छ। नयाँ कार्या सम्पन्न हुनेछ । साथी भाइ संगको सम्बन्ध सुमधुर हुनेछ ।
यात्रामा सावधानी अपनाउनु होला । गरेका कार्य पूर्ण नहुन सक्छ । शारीरिक तथा मानषिक रुपमा अस्वस्थ अनुभव गर्नु हुनेछ । मध्यान्ह पछी काममा जोस जागर बढ्ने छ । पारिवारिक वातावरण अनकुल हुनेछ । आत्मविस्वास बढ्ने छ । मनोरञ्जनमा धन खर्च हुनेछ।
व्यापारमा लाभ हुने छ । कुनै रमणीय स्थलको भ्रमण हुनेछ । मध्यान्ह पछि शारीरिक तथा मानषिक स्वस्थ्यमा समस्या आउन सक्छ । आँखा सम्बन्धि समस्याले सताउन सक्छ । पारिवारिक कार्यमा धन खर्च हुनसक्छ । दैनिक कार्य सहज हुनेछ ।
नयाँ कामको थालनीको लागि दिन शुभ रहेको छ । अधुरा कार्य पुरा हुनेछन् । मित्र तथा आफन्तबाट उपहार प्राप्त हुनेछ । व्यापारमा लाभ हुनेछ । परिवार संग रमाइलो समय बित्नेछ । आय वृद्धि हुनेछ । छोटो रमाइलो यात्रा हुनेछ ।
व्यापार क्षेत्रबाट लाभ हुनेछ। लामो यात्राको योग बएको छ । स्वस्थयमा समस्या हुन सक्छ । टाढा रहेका आफन्तको खबर मिल्नेछ । काममा सहकर्मीको सहयोग मिल्नेछ । परिवारमा शुख शान्ति छाउनाले मन प्रसन्न हुनेछ । पद उन्नतिको साथै मान सम्मान प्राप्त हुनेछ ।
अधिक कामको बोझाको कारण थकान महसुस हुनेछ । निर्धारित समयमा नै कार्य सम्पन्न हुनेछ । स्वास्थ्यमा समस्या आउन सक्ने हुदा खान पानमा बिषेस ध्यान दिनुहोला । यात्रामा बाधा हुनसक्छ । नयाँ कामको थालनीको लागि समय शुभ रहेको छ । विदेश जानको लागी अनुकूल परिस्थितिहरु सिर्जना हुनेछ ।
शारीरिक तथा मानशिक रुपमा स्वस्थ अनुभव हुनेछ । परिवार तथा आफन्तको साथमा उत्तम भोजन हुनेछ । मध्यान्ह पछी मनाषिक तनाव बढ्ने छ । मध्यान्ह पछी खान पानमा बिषेस सावधानी अपनाउनु पर्ने हुन्छ । थालनी गरेका कार्य पूर्ण हुनेछन् । यात्रामा समस्या आउन सक्छ ।
दिन हर्षित र उत्साहीत मानसिकता संग बित्नेछ । गरेका कार्य योजना पुरा हुनेछन् । अधुरा कामहरु पुरा हुनेछन्। आर्थिक लाभ हुने सम्भावना छ। घरेलु जीवनमा मिठास रहनेछ। आकस्मिक धन लाभको योग रहेको छ । छोटो यात्राको योग बनेको छ । व्यापारीगरुको व्यापारमा वृद्धि हुनेछ । विदेशमा रहेका आफन्तको शुभ समाचार मिल्नेछ ।
अपेक्षा गरे अनुसारको फल प्राप्त हुनेछैन। तैपनि काम प्रति तपाइको भक्ति कम हुनेछैन। स्वास्थ्य राम्रो हुनेछ । मध्यान्ह पछी अधुरा कार्य पूर्ण हुनेछन् । आर्थिक लाभ को सम्भावना छ। आमाबाट शुभ समाचार निल्नेछ । सहकर्मीको सहयोग प्राप्त हुनेछ ।
बिद्यार्थी, कलाकार र खेलाडीहरुको लागी दिन राम्रो रहेको छ । बुबा र सरकार बाट लाभ हुनेछ। मनोबल बढ्ने छ। त्यसैले सफलतामा कुनै बाधा हुनेछैन। स्वास्थ्यमा समस्य आउन सक्ने हुदा घर बाहिरको खान नखानु होला । पठन् पाठन् क्षेत्रम रुची बढ्नेछ ।
काल्पनिक संसारमा दिन बिताउनुहुनेछ। रचनात्मक शक्तिले पनि उचित दिशा प्राप्त गर्नेछ। परिवार तथा आफन्त संग उत्तम भोजनको आयोजना हुनेछ । दैनिक कार्यहरु आत्मविश्वास बढ्ने छ । बिद्यार्थीहरुको अध्ययन को लागी समय राम्रो छ।